रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारण – हुन्डीको कारोबार ! - Mission Nepal Khabar
काठमाडौं : बैंङ्क प्रणाली बाहिर नगदको अवैध कारोबार बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर वैदेशिक रोजगार र त्यसको कमाइले धानेको अर्थतन्त्रमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगार ९९ प्रतिशतले बढेको छ तर विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) भने पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा घट्दै गएको देखिएको छ । जानेको प्रतिशत बढेको तीन महिनामा नै उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स मापनको आधार नबन्न सक्छ ।
तर पहिले विदेशमा रहेकाले पनि बैङ्क प्रणालीभन्दा बाहिरी माध्यमको प्रयोग गरी पैसा पठाउँदा वैध कारोबारबाट देखिने रेमिट्यान्स घटेको हो । रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारण हो अवैध रूपमा हुने हुन्डीको कारोबार ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको तीन महिनामा रेमिट्यान्स ७.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । अमेरिकी डलरसमेत ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
आव २०७७/७८ मा विदेश जानेको सङ्ख्या ९६.८ प्रतिशत वृद्धि भई ६६ हजार ३१६ भयो । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यासमेत ७८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४ हजार ८२३ पुग्यो तर बैङ्किङ माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स भने यो पछिल्लो वर्ष ८.१ प्रतिशतले घट्यो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको तीन महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २८६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष २३ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स यस वर्ष भने १८.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
आज पौष २८ गते बुधबार, श्री कृष्णको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल
दुर्गम गाउँमा गाडी पुग्दा स्थानीय हर्षित बुधबार २८ पुष, २०७८
खुल्यो तराईबाट चीन जोड्ने ढोका बुधबार २८ पुष, २०७८
आज माघ ११ गते मंगलबार, गणेश भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल बुधबार २८ पुष, २०७८
धनकुटा ४ छारागाउँमा घरभित्र पुरिएको अवस्थामा महिलाको सव फेला बुधबार २८ पुष, २०७८
रामायणमा को बन्लान् ‘राम’, महेश बाबु कि रणबीर कपूर ? बुधबार २८ पुष, २०७८